के फेसबुकको ‘मृत्यु’ सत्य हो ? « Karobar Aja
दस्तावेज, जेष्ठ १४ गते सोमवार ,२०७५, काठमाण्डौं – पछिल्ला केही वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक धेरै पटक विवादमा आएको छ । कहिले विज्ञापनलाई लिएर त कहिले न्युज फिडमा गरेको हेरफेरलाई लिएर फेसबुक विवादमा आइरहन्छ । हालसालै फेसबुकलाई आफ्नो प्रगोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना उनीहरुको अनुमति बिना तेस्रो पक्षलाई बेचेको आरोप लागेको थियो । यो विवादपछि फेसबुकको ‘मृत्यु’को नजिक रहेको भविष्यवाणी गरिएको छ ।
यदि यसो भयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन किनभने, धेरै कम्पनीहरु विवादमा परेपछि बर्बाद भएका छन् । सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका धेरै कम्पनीहरु पनि ‘मृत्यु’को यात्रामा गइसकेका छन् । यस्तोमा यदि फेसबुकको अन्त्यको भविष्यवाणी भइरहेको छ भने गलत के छ त ? तर, यस्तो हुनु अहिल्यै सम्भव भने देखिँदैन ।
यो सुनुवाईको क्रममा जुकरबर्गले उनको कम्पनीले आफ्नो सेवाहरुको प्रयोग फेक न्यूजको रुपमा हुनबाट रोक्नका लागि जरुरी कदम नउठाएको कुरा पनि स्वीकार गरे । त्यस्तै उनको वेबसाइटले दोस्रो देशका चुनावमा हुने हस्तक्षेप रोक्नको लागि डाटा लिक रोक्न पुरै तरिकाले उपयुक्त कदम उठाएको थिएन ।
यसै वर्ष मार्चमा ब्रिटेनको कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको सूचनाहरु उनीहरुको जानकारी बिना प्रयोग गरेको थियो । यस काण्डलाई लिएर अमेरिका मात्रै होइन, अन्य देशहरुमा पनि धेरै बबाल भयो । यसपछि कम्पनीले आफ्नो गल्ती स्विकार गर्‍यो र आफ्नो कामकाजको तरिकामा सुधार गर्ने बाचा गरेको थियो ।
मनोवैज्ञानिकहरु भन्छन्, फेसबुकले मानिसहरुको एक आधारभुत आवश्यकतालाई पनि पुरा गरेको छ । त्यसैले अहिले नै यसको मृत्युको भविष्यवाणी गर्नु गलत हुन्छ । हरेक मानिस अरुसँग जोडिन चाहन्छ । आफ्नो सुखदुःख, सफलता, प्रसिद्धि उपलब्धी अरुलाई बाँड्न चाहन्छन् र फेसबुकले यो आवश्यकतालाई पूरा गरेको छ । फेसबुकबाट हट्नका लागि ‘डिलिट फेसबुक’ जस्ता नामका विभिन्न आन्दोलनहरु चले त, पनि धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरु केही समयपछि नै फेसबुकमा फर्किए ।
यही कारणले पनि मानिसहरु फेसबुकमा जोडिन्छन्, यसलाई केही समय चलाउन छोड्छन् तर, फेरि फर्केर आउँछन् । त्यसै कारणले पनि पटकपटक विवादमा आँउदा पनि फेसबुकको प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या घटेको छैन । क्याम्ब्रिज एनालाटिका स्क्यान्डलपछि फेसबुकका सीइओ मार्क जुकरबर्गले ८.७ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुबाट उनीहरुको निजी जानकारी चोरिएकोमा माफी मागे ।
प्रोफेसर स्कट भन्छन्, ‘मानिसहरु सामाजिक सञ्जालको खेलबाट रिसाएका छन् । तर सोच्नुहोस्, उनीहरु आफ्नो रिस कहाँ पोख्छन् ? त्यही सामाजिक सञ्जालको प्लेटर्फममा !’ प्रोफेसर स्कट भन्छन्, ‘फेसबुकका औसत २.२ अरब मासिक प्रयोगकर्ता छन् । यस्तोमा ठूला कम्पनीहरुले फेसबुकलाई विज्ञापन दिनबाहेक अरु बाटो छैन । त्यसैले फेसबुकको अन्त्य यति छिट्टै हुदैन ।’